ज्योतिको हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, आवेदन दिन कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » ज्योतिको हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, आवेदन दिन कहाँ जाने ?
काठमाडौं - ज्योति विकास बैंकको १००% हकप्रद सेयर भर्ने बुधबार अन्तिम दिन हो । बैंकले १ः१ अनुपातमा १ करोड १० लाख ४३ हजार १७१ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । हकप्रदका लागि यसको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल नक्साल, काठमाडौं र ज्योतिको केन्द्रीय तथा सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन पाइनेछ । यो हकप्रदमा वैशाख १३ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन ज्योतिले १००% हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । हकप्रद सेयर बिक्रीपछि ज्योतिको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २० करोड ८६ लाख ३४ हजार २०० रुपैयाँ पुग्नेछ । ज्योतिले चुक्ता पुँजी बढाउने क्रममा राप्तीभेरी विकास बैंकलाई एक्वाएर गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ज्योतिले १९ करोड २६ लाख ५८ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३० रुपैयाँ ८६ पैसा छ ।